Maxay tahay World-ka FUBAR?
Dib udhigista ereygan qarsoodi ah ee dhab ahaantii soo koobaya
FUBAR dhab ahaantii waxay u egtahay erey, laakiin ma aha mid. Dhab ahaantii, FUBAR waa runtii warqad shan xaraf ah oo loo isticmaalo in lagu metelo weedh khaas ah.
FUBAR waxay u taagan tahay:
F *** ed Over Beyond Dhammaan / Maqnaan / Aqoonsi / Dayactir
Tani waxay u shaqaysaa ilaa lix tafsiir oo la yaqaan:
F *** ed ka sarreeya dhamaan sababaha
F *** ed ka baxsan waxkasta oo sababi ah
F *** ed Up Ka Saarida Aqoonsiga Dhamaan
F *** ed ka sarreysa Aqoonsi kasta
F *** ed Up Beyond Repair kasta oo kasta
Waxaad buuxin kartaa astaamahan wixii waraaqo ah ee aad ogtahay waa inay halkaas joogaan si loo sameeyo F-bamka. Inkastoo labadii xaraf ee ugu dambeeyay A iyo R ay la midoobi karaan erayada kale, macnaha guud ee ka danbeeya weedha waa isku mid.
Macnaha iyo asalka of FUBAR
Dadku sida caadiga ah waxay yiraahdaan wax ama qofku "f *** ed" marka ay u arkaan in ay yihiin tayada xun ama aan loo baahnayn, sida haddii ay waxyeelo u gaarto. Dhibaatadani waxaa laga yaabaa in loo arko qaab jidheed, mid maskaxeed, aragti ama dareen falsafadeed.
FUBAR waa erey milatari oo milatari ah oo horay u dhicin ka hor inta aaney internetka ahayn, oo loo adeegsaday dagaalkii labaad ee aduunka. Shaqaalaha militariga waxaa loo yaqaanaa inay si aan rasmi ahayn u isticmaalaan si ay ula xiriiraan markii wax waxyeello u geysteen si ay u aqoonsadaan ama u dayactiraan.
Sida FUBAR loo Isticmaalayo Maanta
Inkasta oo uu leeyahay xididada milatari, FUBAR ayaa u kordhay si ay u noqoto xarfmo ku haboon in la isticmaalo nolol maalmeedka marka qoraalka ama qorista internetka. Waxay ku helaysaa dhibic si dhakhso leh iyada oo aan loo baahnayn in la sii wado.
Dadku waxay sida caadiga ah isticmaalaan FUBAR si ay u sharaxaan wax kasta oo ay u maleynayaan inay xun yihiin, khaldan yihiin ama aysan ahayn kuwo ku haboon. Waxay ka hadli karaan xiriirka, cimilada, dhacdo siyaasadeed, xaalad caafimaad, qaab internet ama wax kasta oo qorraxda ka hoosaysa. Haddii wax kastoo ka hor imanaya rabitaankiisa ama caqiidadiisa, FUBAR farsamo ahaan waxaa loo adeegsan karaa si ay u sharaxdo muuqaal shakhsi ahaaneed.
Tusaalooyinka sida loo isticmaalo FUBAR
"Waxay go'aansadeen in ay tijaabiyaan dukaanka qaxwaha cusub subixii saaka, lakiin waxa uu niyad jabay in la ogaado in kalluunkoodu yahay FUBAR."
"Kulankan wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan FUBAR labada kooxood oo midkoodna u qalmin in uu ku soo baxo ciyaarta."
"Ma rumaysan karo inaan qashinkayga ku shubay aniga oo aan ku dhufanayo smoothie" ayuu yiri FUBAR.
Markaad u baahato oo aad u baahato & isticmaal 'FUBAR'
FUBAR ma ahan mid kooban oo meel kasta oo wadaag ah u leh. Waa kuwan qawaaniin guud oo aad doonaysid inaad tixgelisid ciribtirka haddii aad tixgelisay inaad ku dartey ereygan yar ee ereyada internetka ama qoraalkaaga .
Isticmaal FUBAR marka:
Iskuday inaadan qof kale ku hilmaamin. Waan ka xunnahay, laakiin qaybaarkan qaaska ahi si sax ah uma socdaan si aad u noqoto mid caqli leh oo sharaf leh. Haddii aad si ula kac ah u daba-galayso wax ku saabsan warbaahinta bulshada ama saxiibka qoraalka ah oo aadan hubin inaad haysato nooc ka mid ah sumcadda, waxaa laga yaabaa inaad fiican tahay inaad isticmaasho FUBAR.
Waxaad ogtahay in kuwo kale ay ku habboon yihiin F-bamka. FUBAR waxay ka koobantahay F-bamka, si dabiici ah, waa inaad isticmaashaa oo keliya markaad la xiriirto dadka isticmaala F-bombyada naftooda ama hore u maqlay / aragtay inaad isticmaasho. Wadahadal caadi ah oo lala yeesho saaxiib dhow, tusaale ahaan, waxay noqon kartaa mid fiican.
Waxaad ogtahay in dadka kale aysan ku wareersanayn. Haddii dadka aad qoreysid ama isgaadhsiinta si joogta ah u isticmaasho erayada gaaban iyo qaababka kale ee internetka, waxay u badan tahay inay ogaadaan waxa FUBAR ka dhigan yahay marka la barbardhigo kuwa ku dheggan hingaadka iyo naxwe ahaan. FUBAR ma ahan ereyga ugu caanka ah, sidaas darteed waxa loo isticmaali karaa jahawareer badan marka loo eego fahamka dadka aan si fiican u baran bogga internetka.
Ha isticmaalin FUBAR marka:
Waxaad la yeelanaysaa wada hadal qatar ah. Haddii aad u sheegto tacsidaada qof ka lumay qof jecel ama farriin fariin muhiim u ah madaxaaga, culeyska mawduuca mawduuciisu waa inuu kuugu filan yahay inuu kugu qanciyo inaad isticmaasho FUBAR. Ma ahan haboon.
Waxaad jeceshahay inaad ixtiraamto (xitaa markaad wada hadlaysid). Inkasta oo FUBAR ugu fiican loo isticmaalo wada sheekeysi caadi ah, waxaa laga yaabaa in aad ku dhex gasho sheekooyin aan caadi aheyn oo aad adigu rabto inaad ixtiraamto-iyo inta badan waxaa sida ugu fiican loo sameeyaa adiga oo iska ilaaliya isticmaalka luuqad adag. Tusaale ahaan, haddii aad fariisinaysay qof ku yaal bogga internetka ee shukaansiga , waxaad u maleyneysaa inaad rabto inaad si fudud u dayactirto, laakiin waxaad ku muujineysaa inaad ixtiraamto si aad u hagaajisid fursadaha aad ku heli kartid inaad jeclaato.
Hadalka iyo naxwaha waa in la sii wadaa. Iyadoo aan loo eegin codka ama mawduuca wadahadalka, mararka qaarkood hingaad iyo naxwe ahaan waa muhiim. Tani waa run gaar ahaan haddii aadan garaneynin qofka / dadka aad la xiriirto si aad u wanaagsan ama haddii ay heystaan ​​higaad fiican iyo naxwe ahaanba inta ay wada hadlaan.
Maxaa Dhulka HBIC u taagan yahay?
Maareynta Fariimaha Emailka halkii ay u Gudbin lahaayeen
Maxay Yihiin 'JFC'?
Talooyinka Qoraalka ee Qoraalka ah ee Ka Hagaagay Qorshooyinka Xogta
Waa maxay INB4 dhab ahaantii macnaheedu?
Maxay Taas micnaheedu tahay marka qof uu jawaabo 'Mhm'?
Sida Loo Dhigayo Dhagaysiga Khatarta ah: URLs
Sidee Khasaaradu u jebin karaan codkaaga
Maxay Tilmaameedka Raspberry Pi-ga ah ee aad iibsaneysid?
Maxay Foomka MDB?
Sida Loo Bedeli karo Guriga iyo Akhlaaqda Bilaabashada ee Windows
5 Qalabka Maqaarka ee iTunes Waxtar kuu Yeelan Ma Ogtahay
Dib u soo celi ama Koobi Mozilla Thunderbird Profile
5 Ciyaaraha iPhone oo xitaa ku fiican TV-ga Apple
Ammyy Admin 3.6 Dib-u-eegid
Sida Loo Helo Gudaha Farriinta Muuqaalka
CES 2016: Sawirada Dijital ah ayaa la soo bandhigay
Aragtida iyo Isticmaalka 3D TV
Fasallada Kulliyadda Bilaashka ah ee Online iyo Sida Loo Helo
Sidee loo Isticmaalaa Furahaaga Aqoonsigaaga Microsoft
Sida Loo Beddelo Mashiinka Raadinta Safari ee Windows
Sida loo Aqoonsado Qoraalkaaga Muuqaalka Muuqaalka ee Outlook Express
Waa maxay qaabka mudnaanta leh?
Helitaanka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka iyo Feel Xarunta Warbaahinta
Wadaagista Dukumentiyada SharePoint Online
Tilmaame-barka Bilowga ah ee lagu helayo Fikradaha Muhiimka ah